तीन दशक दमक सफाइमा पसिना बगाएकालाई नगरपालिकाले बेरोजगार बनाइदियो । - Kanakai Online
तीन दशक दमक सफाइमा पसिना बगाएकालाई नगरपालिकाले बेरोजगार बनाइदियो ।
चिरञ्जीवी घिमिरे,दमक– ७ का कैलाश मल्लिक तीन दशकदेखि दमक सहर निरन्तर सफाइ गरिरहेका थिए । ०४९ मा दमक नगरपालिकाले बजार सफाइका लागि दैनिक ज्यालादारीमा उनलाई नियुक्ति गरेको थियो । त्यसयता उनी अनवरत बिहान ४ बजे दमकचोक आग्ने र ९ बजेसम्म झाडु लगाएर नगर सफा गर्ने काम गरे । तर, सोमबार त्यस्तो भएन । सदाझैँ बिहान काममा जाँदा उनलाई काम दिइएन । बरु दुव्र्यवहार गरियो । कारण थियो, नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु र निजी क्षेत्रले उनीहरूलाई कामबाट निकाल्नु ।
२९ वर्षदेखि नगर सफा गर्दै आएका उनलाई नगरपालिकाले एकाएक बेरोजगार बनाइदियो । उनी बेरोजगार मात्र भएनन्, तीन दशक दमक सफाइमा पसिना बगाएका उनलाई नगरपालिकाले रित्तो हात घर फर्कायो । ‘काम गरेको २९ वर्ष भयो । हामीलाई कहिल्यै स्थायी बनाएनन् । सधैँ दैनिक ज्यालादारीमै काम लगाइयो, अहिले आएर त्यही कामबाट पनि निकालियो, अब कसरी पेट पाल्ने ?’ कैलाशले नयाँ पत्रिकासँग आफ्नो पीडा पोखे । कैलाश मात्र होइनन्, उनीजस्तै ३० मजदुर अहिले बेरोजगार बनाइएका छन् ।
सिकेन्द्र मल्लिकले ०६० देखि दमक सहर झाडु लगाएर सफाइ गर्दै आएका छन् । उनका बुबा रामजीले एक दशक दमक सहरमा कुचो लगाए । ०६० सालमा उनको मृत्यु भयो । बुबाको बदला छोरा सिकेन्द्रले काम सुरु गरे । बुबाको मृत्यु हुँदा पनि नगरपालिकाले केही सहयोग गरेन, अहिले सिकेन्द्रलाई समेत कामबाट निकालिदियो । ‘मैले ६ हजार र बुढीले ६ हजार गरेर महिनामा १२ हजार कमाएर पाँचजनाको परिवार पाल्दै आएका छौँ । योभन्दा अरू काम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘गर्दै आएको कामबाट निकालेपछि हामीले कसरी पेट पाल्ने ?
नगरपालिकाका पदाधिकारीको बेवास्ताले तीन दशकसम्म काम गरेका सफाइ मजदुर खाली हात घर फर्कंने अवस्था बनेको छ । उनीहरूले दमक नगरपालिकासँग स्थायी गर्न, वा ३० वर्ष काम गरेको श्रमको सम्मान गर्न माग गरेका छन् । तर, पदाधिकारीले उनीहरूका कुरा सुनेको छैन । ‘हामीलाई निकाल्ने भए अर्को व्यवस्था त गर्नुप¥यो नि ! यत्रो वर्षदेखि काम गर्दै आएका छौँ । सरकारले केही न केही त हेर्नुपर्‍यो नि,’ उनीहरू भन्छन् ।
‘तीन वर्षअघि दसैँमा मजदुरका छोरा–छोरीले पनि खानुपर्छ, केही ज्याला दिनुपर्‍यो भनेर आवाज उठायौँ । नगरपालिकाको सरसफाइ प्रमुख द्रोण थापाले हामीलाई तिमीहरू नेता भयौ भन्दै गाली गर्नुभयो,’ सिकेन्द्र भन्छन्, ‘उहाँले एक वर्ष काम नै दिनुभएन । दसैँका वेला हाम्रा छोराछोरीलाई कस्तो भयो होला ? गरिबका छोराछोरीले पनि त खान–लाउन त माग्छन् नि !’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोही पनि जनता घरविहीन हुनु नपर्ने र भोकै मर्न नपर्ने बताउँछन् । तर, उनकै गृहनगरका यी विपन्न दलित गर्दै गरेको काम नगरपालिकाले खोसिदिएपछि बेरोजगार बनेका छन् । उनीहरू भोकै हुने खतरा पनि छ । विपन्न दलितले दमक नगरपालिकासँग पटक–पटक माग पूरा गर्न वार्ता बस्न माग गर्दै आएको छ । तर, दमक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि विपन्न दलितसँग वार्ता बस्नै चाहँदैनन् । ‘हामीले वार्ता गरेर समस्या सामाधान गरौँ भनिरहेका छौँ । यी दलितसँग के बस्ने भनेर हो कि, बोलाउनुभएको छैन,’ कैलाश भन्छन्, ‘जबसम्म हाम्रो माग पूरा हुँदैन हामी अरूलाई काम गर्न दिँदैनौँ, आफैँ गर्छौँ । अरूलाई काम गर्न दिँदैनौँ ।’चिरञ्जीवी घिमिरेले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।
April 1, 2021 2:42 pm | फिचर, मुख्य खबर, लोकप्रिय, विचार, शिक्षा, समाचार, समाज, स्थानीय समाचार